Immisa jeer ayay mari doonaan ciyaartoyda La Liga tijaabada Coronavirus ka hor inta aysan ciyaaraha bilaaban? – Gool FM
Immisa jeer ayay mari doonaan ciyaartoyda La Liga tijaabada Coronavirus ka hor inta aysan ciyaaraha bilaaban?
(Spain) 18 Abril 2020. Ka hor inta aanan lagu soo laabanin ciyaaraha La Liga, waxaa lagu soo warramayaa inay kooxaha qaadan doonaan 15 maalin oo ay isugu diyaarinayaan dib u ciyaarista horyaalka Spain.
Xiddigaha u ciyaara kooxaha La Liga ayaa laga baari doonaa xanuunka Coronavirus ugu yaraan saddex jeer inta aanan horyaalka dib loo ciyaarin.
Barnaamijka El Partidazo ee ka baxa Raadiya Cope ee dalka Spain kaasoo la dhageysto inta u dhexeysa Isniinta illaa Jimcaha ayaa baahiyay in maamulka La Liga ay go’aamiyeen in saddex jeer la hubin doono xaaladda ciyaaryahan walba.
Tijaabada ugu horreysa waxaa ciyaartoyda mari doonaan labo maalin ka hor inta aysan bilaabin tababarka gaar-gaarka ah, waxaana lagu baari doonaa in dhiig laga qaado.
Tijaabada labaad ayaa sidoo kale looga baari doonaa hab dhiig qaadis ah, waxaana lagu sameyn doonaa ka hor inta aysan bilaabin tababar wadareedka.
Halka baaritaanka saddexaad xiddigaha laga qaadi doono ka hor inta aanan dib loo daah rogin horyaalka La Liga si looga hor tago in qof laga waayay dib looga helo.
Kooxda Ajax oo shaaca ka qaaday qiimaha lagu heli karo Goolhaye Andre Onana... (Kooxdee iibsan doonta Chelsea, Barcelona mise PSG?)
Karim Benzema oo aysan wax carqalad ah ku ahayn qorsha ay Real Madrid ku doonayso Haaland & Mbappe